Goobaha Dadka Waaweyn Waxay Ka Sameeyeen 50 Meelood Oo Ugu Booqashada Badan Singapore
Haa, waad si sax ah u maqashay. Aad ayey noogu fududdahay inaan internetka ku isticmaalno maanta iyo maanta, ha noqoto taleefannadaada gacanta ama kombiyuutarka qolka fadhiga. Sababtoo ah helitaanka internetka ee Singapore oo kordhay awgeed, xaddiga taraafikada webka ee goobaha dadka waaweyn shaki la’aan waa cabsi gelin. U fiirso qiimeynta Similarweb ee 50ka ugu sareysa ee Singapore booqdayaasha, waxaadna ogaan doontaa wax aan caadi ahayn. 4 Bogagga dadka waaweyn ama halkii, boggaga p * rn, ayaa ka mid noqday liiska websaydhyada ay weheliyaan kooxaha waaweyn sida Google, Facebook, iyo Yahoo. Hadaadan aqoon hada, 30 boqolkiiba internetka waxaa ku qulqulaya waxyaabaha qaangaarka ah.
Waxaan dabagal ku sameynay ereyada qaar markay ka hor imaanayaan tilmaamaha mareegaha Google. Laakiin waa inaad fiicantahay Maaha wax adag in la qiyaaso ereygu waa kee.
Sir Furan: Sida muuqata, dadka reer Singapore qaarkood ayaa horeyba u yaqaan sida looga gudbo faafreebka si dhaqso leh hab aan kula wadaagi karno (Lagu muujiyay qaybta ugu dambeysa ee qoraalkan ). Psst .. Maaha VPNs ama wakiillada, waa khiyaano fudud. Share iyo like garee, si aan u ogaano sida xun ee aad u rabto!
Nagala soco Facebook wixii macluumaad dheeri ah ee casiir leh.
Waa kuwan 4-ta goobood ee Dadka Waaweyn / P * rn ee ka mid noqday liiska hadda jira:
• Tumblr (19) (isticmaalka 2aad ee ugu caansan Tumblr waa waxyaabaha qaangaarka ah)
Sida qaarkiin laga yaabo inay ogaadaan (Sideed runtii ku ogaan laheyd?), Qaar ka mid ah goobahan waxaa xayiray Macluumaadka-isgaarsiinta Hay’adda Horumarinta Warbaahinta ee Singapore ( IMDA ).
A falanqayn dheeraad ah tirakoobyadan waxaa la sameeyaa dhamaadka qodobkan.
5 eray oo muhiim ah oo la raadiyay (Meelaha kale ee dadka waaweyn) Singaporean P * rn, Singapore JC Girl Bl * wjob, Singaporean P * rn Tumblr, Singapore P * rn, Singapore P * rn Goobaha
Maqaalka Cusub ee La Xiriira: Waqtiyada Caanka Ah Reer Singapore Waxay Raadiyaan Singaporean P * rn?
P * rn hubaal kuma tiirsana barnaamijyada warbaahinta bulshada iyadoo loo adeegsanayo isha taraafikada, kana duwan boggaga caadiga ah. Si loo caddeeyo bayaankan, P * rnHub wuxuu dhawaanahan sababay argagax adduunka oo dhan wuxuuna argagax geliyay dhammaan adeegsadayaasheeda kaliya bishaan doqonka ah ee Fool. Bogga hogaaminaya p * rn wuxuu ku guuleystey kaftankii ugu weynaa adoo khiyaameynaya isticmaaleyaasheeda inay u maleeyaan inay u suurtageliyeen wadaagga fiidiyowga otomaatiga ah dhammaan xisaabaadka bulshada. Sheegashada muuqaalka cusub inuu yahay “kacaan,” isticmaaleyaasha waa la khiyaaneeyey laakiin si dhakhso leh ayey P * rnHub ugu qancisay in baarinimadooda ay had iyo jeer badbaado iyo badbaado ku yeelan doonto sirta iyo hab maamuuska HTTPS Sifiican ayuu u ciyaaray P * rnHub.
Marka sidee yeeleen?
Mar labaad, iyadoo la adeegsanayo P * rnHub falanqayntayada iyada oo la tixgelinayo inay gaadhay heer caalami ah # 21, waxaan sameyn doonaa burburka ilaha taraafikada.
Amarka mugga taraafikada:
Toosan (39.49%) – Waxaa loo sii kala saari karaa hits toos ah iyo mugdi bulsho taraafikada. Kooxdan taraafikada ah waxay badanaa ka kooban yihiin soo booqdayaal soo noqnoqda oo daacad ah. Maandooriyuhu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah waxyaabaha la soo koobi karo laakiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah soo saarista taraafikada webka ee dadka waaweyn iyo bogagga intarnetka ah.
Raadinta (32.97%) – Ha noqoto mid caajis ah inaad ku qorto URL-ka buuxa cinwaanka cinwaanka ama xusuusta lumisa lama filaan ah, taraafikada raadinta ayaa ah mid aan la inkiri karin inay tahay isha koowaad ee taraafikada degel kasta, xitaa P * rnHub. Si kastaba ha noqotee, waxa xitaa ka sii cabsi badan ayaa ah in taraafikada raadinta ay sidoo kale ka kooban tahay booqdayaal dhawaan ku soo biiraya p * rnography, ama aan aqoon P * rnHub gabi ahaanba kahor intaadan baarin. 15,161 eray bixin raadin dabiici ah, “P * rn” waa kan 2aad ee liiska oo leh tiro 9% ah wadarta taraafikada raadinta. Sidaan horeyba u sheegnay, isticmaaleyaashu waxay raadiyaan ereyo kale oo muhiim ah sida Singaporean P * rn, Singapore JC Girl Bl * wjob, Singaporean P * rn Tumblr, Singapore P * rn, Singapore P * rn Goobaha sidoo kale.
Xiriirinta (23.05%) – Gaadiidka laga soo gudbiyey degellada kale, gaar ahaan bogagga kale ee qaangaarka ah iyo tusaha.
Bulsho (3.54%) – Maaha tiro la yaab leh. Si kastaba ha noqotee, barmaamijka bulsheed ee horseedka u ah P * rnHub waa Reddit, maahan Facebook (3aad liiska).
Xayeysiiska (0.72%) – Ilo yar laakiin muhiim u ah taraafikada. Tani waa xeelad lagu soo jiito booqdayaasha cusub iyo kuwa aan lagaranaynin P * rn.
Boostada (0.24%) – Ugu dambeyntii laakiin hubaashii ugu yaraan, wargeysyadu waxay ahaayeen istiraatiijiyad dhiirrigelin wax ku ool ah oo loogu talagalay bogag badan tan iyo maalmihii wanaagsanaa ee hore. Si kastaba ha noqotee, waxa aanan helin waa nuxurka wargeysyadan.
Xaqiiq Madadaalo: Soo-booqdayaasha dumarka ah ayaa soo kordhayay, ugu yaraan Yurub iyo Mareykanka . Qaybta haweenka ee taraafikada ayaa inta badan ku kala duwan 20-30%, taas oo ku xidhan waddanka.
Gunno – Trick fudud oo fudud
Meelaha ugu sareeya ee booqday ee loogu talagalay waxyaabaha burcadbadeednimada loogu haysto Singapore:
Waxaa sidoo kale la ogaaday inay jiraan xiriir wanaagsan oo wanaagsan oo u dhexeeya bogagga dadka waaweyn iyo waxyaabaha ku jira burcad-badeedda. Sida lagu arkay tartamayaasha iyo qaybaha la midka ah ee ka mid ah warbixinnada goobta ee faahfaahsan, boggaga wax lagu qoro ee burcad-badeednimada ah ayaa si isdaba-joog ah loo taxay xagga sare ee qiimeynta.
• joornaalada .to (20)
• Baidu (22) ?? Sug, dadku wali ma isticmaalaan Baidu si ay u soo dejistaan muusikada bilaashka ah? Mise waa Wikipedia keliya ee Shiinaha halkan deggan?
• thepiratebay.org (49) Natiijo ahaan, Singapore waa kaalinta # 9 ku saabsan burcad-badeednimada internetka ee 2016.
* Darajooyinka ayaa lagu taxay barta dhajintaan. Sidaa darteed, waxay si aan shaki ku jirin u socdaan si marba marka ka dambaysa is bedbeddelayaan.
Intooda badan, xitaa The Straits Times, oo kujira 28, lama tartami karin taraafikada goobaha dadka waaweyn. Waxaad ka hubin kartaa inta ka hartay qiimeynta ku taal Similarweb. Faafreebka hadda ka socda Singapore miyuu waqtigiisii dhammaaday? Dawladu ma kor u qaadi doontaa oo ma adkayn doontaa qabashada websaydhadaan? La wadaag oo soo bandhig saaxiibbadaa! Xusuusnow inaad naga raacdo Facebook!
Goobaha Cusub ee Dadka Waaweyn ee La Xiriira: Waqtiyada Caanka ah ee Reer Singapore Raadiyaan P * rn? (Erayada furaha ah waxaa ka mid ah Singaporean P * rn iwm.)
Waxay umuuqataa inaad wali halkaan joogtid, maxaa diidaya inaad hubiso falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan sida Wareegyada Nolosha ay kuu adeegsatay adiga oo aad ugu booday ganacsigooda
Hordhaca IMDA Video:
• Cringe Fest: SGCL 2017 B Qaybta (League of Legends)
• 8 Noocyada NSF ee Singapore (Adeegga Qaranka)
• 222 Heeso Shiine Ah Dhammaanteen Waan Jeclahay Inaan Dhegeysanno (taxane 2-qayb ah)
• Waqtiyada Caanka ah ee Reer Singapore Raadiyaan P * rn?
Home » Uncategorized @so » Goobaha Dadka Waaweyn Waxay Ka Sameeyeen 50 Meelood Oo Ugu Booqashada Badan Singapore